Heart Museum: ကွဲကွာခြင်း
My heart is empty without you.
အလည်လာတာ ကျေးဇူးပါ။ မိတ်ဆွေအားလုံး ပျော်ရွှင်သော မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်များကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ကိုယ်ဘာမှ လျှောက်လဲချက် မပေးလိုတော့ပါဘူး
သက်သေပြု သစ္စာတခု ဆိုပါရစေ........
မင်းကို ချစ်ခဲ့တယ် ချစ်နေဆဲ
Posted by Heartmuseum at 10:23 AM
June 3, 2010 at 10:56 AM
ကဗျာဖတ်ပြီး ENRIQUE သီချင်းနားထောင်သွားပါတယ် ...
June 3, 2010 at 5:43 PM
June 3, 2010 at 6:29 PM
အချိန် ရရင်ရသလို စာတွေဆက်ရေးပါ။
နုနေတာ ငါးနှစ်လောက် ပြန်ငယ်သွားသလိုပဲ =)
(လူကြီးကို မလေးစားသလိုဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ)
June 4, 2010 at 3:25 PM
June 5, 2010 at 1:56 AM
အာ..... အမKOM ကလဲ လုပ်ပြီ:D
မသစ်ရေ..... မလန်းဘူး အသဲကွဲနေသည် :P
အာ... နန္ဒာရေ.....ရက်ရက်စက်စက် ဦးဟတ်တဲ့ :D အမြဲတမ်း ၁၈နှစ် သဘောပေါက် :P summer အတန်း မဖွင့်ခင်၊ သင်တန်း မသွားခင် ရက်ပိုင်းလေးအားလို့..... ဟီးးးးး
you လဲ comment တွေ လက်ခံသင့်ပြီ။ ဒေါ်မာမာအေး ဗျုးထားတာ ကောင်းတယ်။
ရွှန်းရေ... ၁၂နှစ်၊၁၅နှစ် ငယ်တယ်ပြောမှ ထမင်းကျွေးမယ်။:P
အမရာကလဲ.... နုဆို ငယ်သေးတယ်လေ... ဟိုနေ့ကမှ အမေက အပြင်ကို တယောက်ထဲလွတ်တာ.... :P
June 5, 2010 at 5:12 AM
စွဲမြဲတဲ့ အချစ်ကို လေးစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိတော့ ဒီလိုကြီးပဲ မခံစားစေချင်ဘူး ကိုအညတရကြီးရေ... ပျော်ရွှင်ပါစေ...
လောကကြီးကို ဒီလိုမြင်တယ်။ -----------------------------------
If you can't read the letters, click the picture and then download Myanmar Zaw Gyi Font.
RecreationBurmese classicflash bandShwe Dream Shwe O myanmarmp3pansagarsingforyouFree Myanmar VCDAung WinBurmese MTVMMA Myanmar MP3myanmarsoungs.netmusic all channelMr. EhlarMyanmar YouthShwe videosmyanmar music videokaraoke-micBurmese LyricsHtoo Eain Thin ... NyaKaByar MyintZuRiKhaYanPyarEinMet ThinGyanAlinKarTheeLayTheeBo Aung Dinfree-moviewatchBreeze MP4 For AllI FilmCHANNEL ESPN Hulu
RecipeHsa*Ba!JaMungDanSuBuuEainSueNweLayColorful RecipeMoeGaungThu ShinMinYaTharChoLu LuWutYeTT SweetMy KitchenHtet FamilyWutyee Food HouseSnowEain Shin Ma BabytasterEVYBurmese Taste HouseBaRaNiDr., MyintMyintKhinVietnamese Food
Myanmar Radio NewsVOA NewsBBC NewsRFA NewsDVB NewsNHK News
MedicalDr. Win TheinDr.Khin Mg WinDr. Soe Myint Public Health HtetAungHlaing
TechnologyUtilities & KnowledgeBloggers HelpMy little world Engineer4myanmar Utube in MP4KP3Saturn God MyanmarTutorialMgThetWaiUnicode-Zawgyi Sound Cloud Downloader VideotoMP3PDFtoWordU tube to MP3Convertto MP3 convert to MP4convertto sketchPhoto convertUtube video editText to VoiceCBoxApp I DhammaPhoe HtetMoe Htet Myint Blog Photo Edit BlogCounterArchitect Corner
Gov., PropagandaPresident Office PyiThuHlutTawMinistry of Information Constitutional TribunalMirror NewsMyanmar Ahlin MyaWadyMyanmarTimesKhitLuNgeSnapShot
Myanmar News Thit Htoo Lwin MizzimaIrrawaddyIrrawaddy BlogNarinjaraShwe Hin TharMoemakha Weekly Eleven MediaThe Voice 7Day News Yangon MediaPopular NewsIndependent NewsMyitMaKha MediaBurma VJ MediaShan Than Taw SintFreedom News GroupThan Daw SintMyanmar News Zone Mandalay GazetteBurma TodayFace MagazineHot News PaePhuhLwarKumudra JournalMessenger NewsMyanma AgeU Satt SuuShweAmyu TayPEOPLE Ma YaMyatShuInternet JournalZay GwetPathein NewsYoYarLayNguYinPyinNaytThit Myanmar Wiki
သွားလည်တတ်တဲ့ နေရာလေးတွေပူပူနွေးနွေး ဖတ်စရာများMyanmar Blog Reader ကိုကြီးကျောက်ကဗျာဦးကလိုစေးထူးကိုရန်အောင်ကလူသစ်ကနေဒါမြန်မာကိုကိုဖရီးကိုလျှာရှည်ကိုရင်ညိန်းကိုမိုးသီးကောင်းကင်ကိုNavanaချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများChitKyiAyeKhinOoMayချမ်းမြဦးခြေလှမ်းသစ်(ကိုဇော်)ဂစ်တာနဲ့ဂီတဆိုးသွမ်းဇာဂနာဇီဇဝါNyo Gyiညိမ်းညိုတခါတုန်းက အမှတ်တရများတီးတင့်ထူးရွှေတူးတူးသာဒီကိုလာDr.LunSwe99Sanayပန်းခရေပန်းခရမ်းပြာပန်ဒိုရာပီတိပေါက်PhooNuThitဖြိုးငယ်ဖိုးတရုတ်ဘကောင်းမျိုးချစ်မြန်မာ မေငြိမ်းမဆုမွန်မေမိုးမခမေပျိုမဗေဒါမေဓာဝီမုဒိတာမိုးချိုသင်းမီးပြတိုက်မွန်းသက်ပန်မင်းကျန်စစ်မောင်မောင်မောင်မျိုးမှော်ဆရာမိုးမြင့်တိမ် မင်းသက်လွင် ရွှန်းမီရွှေပြည်သူရန်မျိုး(မြောက် ကာရိုလိုင်းနား)ရွက်မွန်လပြည့်ရိပ် (ဂျာမနီ)လေးမကိုလူလလားရှိုးသူလင်းထက်ဝဿန်ဦးတော်ဝင်မြန်မာသက်ဝေသံစဉ်မဲ့ အလကာင်္(အိမ့်ချမ်းမြေ့)သဇင်ဏီသစ်နက်ဆူးသူရဲနီတို့ ပျော်စံရာသက်ပိုင်သူဟန်သစ်ငြိမ်ဟန်နီအမရာအိုင်လွယ်ပန်အညတြ(ခေတ္တ နယူးယောက်) အနက်ရောင် အိမ်မက်အမှတ်တရလေးများ(၀ါဝါခိုင်မင်း)အမှတ်တရများစွာသို့အပြာရောင် မိုးစက်ပွင့်လေးများအစိမ်းရောင် မိန်းကလေး အောင် အိုးဝေ(ကိုဇနိ+မဇနိ)အာဇာနည်ဦးသန္တာApprenticeshipgRoW with MEHanna Ingber WinHome sweet HomeJPZJuly DreamMy wonderful moral thoughtsRepublicSteve GreenWeSheMeZephyrzerotrash21>>>>
(English, Burmese) Library ၀ိညာဉ်သစ် စာကြည့်တိုက်ဗမာ့ကြယ်ရွှေစကား E Bookစာပေရိပ်မြန်မာ E-Books ပြည်ထောင်စုကို ဒို့ချစ်သည်အိမ်မက်လှိုင်းဂျူး၏ ၀တ္ထုစုစည်းမှု Myanmar Books Freeဒဂုန်တာရာ ရုပ်ပုံလွှာဦးဝင်းတင်၏ ဘာလဲဟဲ့...လူ့ငရဲဦးနေဝင်း၏ အတွင်းရေးGoogle E-Books
ဗေဒ ဝိဇ္ဖာကွန်ပြူဗေဒ သုခုမချမ်းမြေ့ဦး(တားရော့ဗေဒင်)နက္ခတ် ဗေဒင် ( ကိုပခန်း )မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ်မြန်မာ တားရော့ နှင့် လီနိူမန်လေ့လာဖူးသမျှ ဗေဒင်ပညာ အကြောင်းဟိန်းတင့်ဇော်နက္ခတ်ဗေဒင် မှတ်စုများမြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ဖုန်းရွှေမိုးတား
(ပညာ၊ စီးပွား၊ သမိုင်း၊ နိူင်ငံရေး) ပညာရှင်ကဗျာရေးနည်း(ဦးတင်မိုး)ဦးထွန်းလွင် ဦးထွန်းလွင်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်ခင်မမမျိုးမန္တလေးနွေဦးရှေးမြန်မာအောင်သင်းယောဟန်အောင် မင်းဒင်အတ္တကျော် လူငယ်များအတွက် ပညာရေး Inquest of wisdom အောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပုံတောင် တောင်ကြား ဘိုဘိုလန်းစင်သရပါ လရောင်လမ်း လမ်းအိုလေး
အမှတ်တရ မှတ်တမ်း (6)
Tag သမျှတွေ (5)
တခါတုန်းက ဘ၀တက္ကသိုလ် (4)
နားနားနေနေ စိတ်ပန်းဖြေ (1)
လှသော ရှုခင်း ၊ ချစ်သော မန္တလေး (1)
This Blog , worked by heartmuseum, is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.
ဤဘလော့ဂ်မှ စာမူကို မိတ်ဆွေ များအား ဝေမျှ လိုလျှင် ရေးသားသူ "Heart museum" (သို့မဟုတ်) "အညတရ" ဟုထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။ ဤဘလော့ဂ်တွင် ရေးသား၊ ရိုက်ကူး၊ မျှဝေ ထားသော စာများ၊ ဓာတ်ပုံများ ကို စီးပွားရေးနှင့် နှီးနွယ် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း နေရာများ၌် အသုံးပြု လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မူလပိုင်ရှင် များ၏ ခွင့်ပြုချက် ကြိုတင် တောင်းခံရန် လိုပါသည်။
အလည်လာတာ ကျေးဇူးပါ။ ခြေရာလေးတော့ ချန်ခဲ့ပါ။